Wasiirada Amniga, Gaadiidka iyo Taliyaha Booliska oo hor-tagay Baarlamaanka – Kalfadhi
Wasiirada Amniga, Gaadiidka iyo Taliyaha Booliska oo hor-tagay Baarlamaanka
Kulankii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo uu maanta shir-guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee Golaha Shacabka ayaa maanta waxaa su’aalo lagu weydiiyay wasiiradda Amniga, wasiirka Duulista Hawada iyo Taliyaha Ciidanka Booliska.
Fadhigii maanta waxaa soo xaadirtay 120 mudane, waxaana su’aalihii la weydiinayay wasiiradda ay la xiriireen amniga iyo duulista hawada.
Su’aalihii la weydiiyay waxaa kamid ahaa halkii uu ku dambeeyay baaritaanka Qaraxii uu ku dhintay Allah ha u naxariistee Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Abdiraxman Omar Osman Yariisow.
Balse jawaabta ay heleen xildhibaannada waxaa ay aheyd mid aan dhameystirneyn, madaama wasiirka uu sheegay in baaritaankaasi uu wali socdo.
Sidoo kale, Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxay su’aalo weydiiyeen Taliyaha Booliska, waxaana arrimaha ugu waa weyn ee wax laga weydiiyay ka mid ah dhacdooyinkii u dambeeyay ee dalka ka dhacay, gaar ahaan xayiraadii lagu sameeyay Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa soo jeediyay in wasiiradaha Xukuumadda si adag loola xisaabtamo, maadaama ay sheegeen waxyaabo aan la ogeyn cida u dirsatay ay ka shaqeynayaan, sidaas ay tahayna loo baahan yahay in la ogaado shaqadooda si loola xisaabtamo.
Taliyaha hay’adda Nabad Sugida ayaa ka maqnaa kulankii su’aal weydiinta ee maanta.
Wasiirka Duulista oo wax laga weydiiyay arrimaha Jubaland iyo sababtii uu u tagi waayay Kismaayo, ayaa yiri “Kismaayo la igama joojin, aniga shaqsiyan iska joojiyay, annigoo diidan in dagaal iyo colaad dhaco, aniga reer Jubbaland ayaa ahay, qof iga joojin karta ma lahan, go’aankaas anaa qaatay inaa ka haro, qof aan ka aarsanayo ma jirto, dadka meesha jooga oo dhan waa qaraabo dhib shacabka loo geystay marqaati kama ihi anigana igama imaan”.
Xildhibaan Fowziyo Yuusuf “Nidaamka doorasho ee uu guddiga keenay Baarlamaanka waxaa uu horseedi karaa dagaal”
Soomaaliya oo ka qeyb-galleysa shirka Ururka Baarlamaannada Adduunka